DISTRIKAN’AMBOHIMAHASOA : “Afaka amin’ny fampihorohoroan’ny dahalo izahay”, hoy ireo mponina
Faritra mena amin’ny asan-dahalo sy ny halatr’omby izany Distrikan’Ambohimahasoa izany hatramin’izay. 18 octobre 2021
Tsy mandry andro, tsy mandry alina ny mponina ary misy mihitsy aza ireo voatery matory an-tsaha noho ny afitsok’ireo olon-dratsy. Ankehitriny, tafapetraka any an-toerana ny tobin’ny Miaramila izay hiahy manokana ny fandriam-pahaleman’ny mponina manomboka izao.
Miroso hatrany ny fanatanterahana an’ireo velirano nataon’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina. Voarakitra ao anatin’ny velirano voalohany nataony ny hanomezana fandriam-pahalemana sy filaminana ho an’ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Tetikasa sy fotodrafitrasa maro no efa vita tanteraka ankehitriny. Voatsirika manokana ireo voasokajy ho faritra mena izay hananganan’ny Fitondram-panjakana fotodrafitrasa natao hamerenana izay fandriam-pahalemana sy ny filaminana ho an’ny vahoaka izany.
Distrika maro any amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy iny no nahazo tobin’ny Zandary. Anisan’izany, ohatra, ny tao Amboasary Atsimo. Velombolo ny vahoaka satria mahatsiaro ho manana mpiaro amin’izay izy ireo eo anatrehan’ny fanjakazakana ataon’ireo olon-dratsy. Taorian’ny Faritra Androy, Anôsy dia notsidihin’ny Filoha ihany koa ireo Distrika tao amin’ny Faritra Matsiatra Ambony.
Fotodrafitrasa maro izay mipaka mivantana amin’ny filàn’ny mponina no naorina. Hilamina sy handry fahalemana ihany koa ny ao Ambohimahasoa manomboka izao, raha niaina tao anatin’ny tebiteby sy tsy fandriam-pahalemana hatramin’izay.
Harifomba ny fitaovam-piadian’ireo Miaramila
Vahaolana maharitra, hoy ny Filoha Andry Rajoelina, no apetratsika. Nambaran’ireo mponina avy ao Ambohimahasoa fa tena nanao izay danin’ny kibony ireo dahalo hatramin’izay. Mitokana sady saro-dalana ny Distrikan’ Ambohimahasoa, ka tena manome vahana an’ireo mpanao ratsy izany. Mirifatra mitsoaka ny mponina manoloana izany satria tratran’ny be noho ny vitsy sady mahery vaika ihany koa ny fitaovam-piadiana eo am-pelatanan’izy ireo. Nametraka paikady maharitra hiadiana sy hamongorana hatramin’ny fakany izay tsy fandriam-pahalemana izay ny Fanjakana. Amin’izao voalohany izao dia Miaramila efa matihanina miisa 25 no hiasa eo anivon’ity toby vaovao ity.
Izy ireo no handray an-tanana ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary hampandry fahalemana ny Distrikan’Ambohimahasoa sy ny manodidina. Fitaovana harifomba izay tsy mena mitaha amin’ny an’ny dahalo no novatsian’ny Fitondram-panjakana ho azy ireo. “Tsy hijanona intsony isika raha tsy mipaka eny ifotony ny fampandrosoana. Fandriam-pahalemana maharitra no hoentina manafoana ny asan-dahalo”, hoy ny Filoham-pirenena. Midadasika satria mirefy 392 metatra toradroa ity tobin’ny Miaramila natsangana ao Ambalakindresy ity izay ahitana birao, toeram-piasana, toerana fanaovana fanomanana ary fanazaran-tena.